ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: အပြောင်းအလဲ
Labels: political post, Thoughts
အလိုအလျောက် မီးပူတိုက်စက်တဲ့ ... ကျမလဲ လိုချင်လိုက်တာ။
ဧကန္တ ကိုပေါ ကိုယ့်အင်္ကျီကိုယ် မီးပူတိုက်ဝတ်ရပုံပဲ။ မဒမ်က တိုက်မပေးဘူးထင်တယ်။ :))
ကျမတော့ ကိုယ့်အင်္ကျီကိုယ် မလိုအပ်ရင် တိုက်မနေပါဘူး။ အေးတော့ အင်္ကျီ အထပ်ထပ်ဝတ်ရတာမဟုတ်လား အတွင်းက အင်္ကျီ လူမြင်တာမှတ်လို့။ :D
အင်းးးး ကျန်တဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေလဲ ကိုပေါ မျှော်လင့်သလို ဖြစ်ပါစေ ... ဆုတောင်းပါတယ်။
ဈေးကြီးပေးရပေးရ ဦးဆုံးအသုံးချမှာပါ။ :P
အမျိုးသမီးထုကတော့ အလိုအလျှောက် မီးပူတိုက်စက်ဆိုတာနဲ့ ညက်လုံးလေးတွေက ကြယ်လေးတွေလို လင်းလက်သွားတာပဲ။ များတို့လဲ လိုချင်တယ်။ အလိုအလျှောက် မီးပူတိုက်စက်ပေါ်ရင် သတင်းပေးကြပါဦး။
ဟွန့် ... ဦးပေါက သူ့မဒမ်ပေါ သက်သာအောင် တောင်းဆိုပေးနေတာကို ... နော့လေ။
အကျီင်္ကိုဝတ်လိုက်ရင်ကိုယ်ငွေ့ နဲ့ မီးပူတိုက်ပြီးသားအကျီင်္
ဒို့ ကိုပေါကတော့ကြော်ငြာနေပြီဗျို့ 
Nice one , ko paw .
You will be so proud of your daughter on day like this.
အလိုအလျောက် မီးပူတိုက်စက် ပေါ်လာလို့ကတော့ တရားဝင် မူပိုင် ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပစ်မယ်။ ပြီးမှ အမြတ်ကြီးကြီးနဲ့ ပြန်ဖြန့်မယ်။ သူဌေးဖြစ်ရချေသေးရဲ့ ဟိဟိ....
ပုံ / ဘူဇွာအမျိုး ဒေါ်ချစ်ကြည်
ပိုစ့်ကို အစအဆုံး သေသေချာချာဖတ်ပါတယ်... ခေါင်းထဲကို စွဲစွဲမြဲမြဲရောက်သွားတာကတော့ အလိုအလျောက် မီးပူတိုက်စက်... ဆိုတာပါပဲ...
ဒါနဲ့ ကိုယ်တယောက်တည်းလား ကြည့်လိုက်တော့ ကော်မန့်တွေမှာလည်း ဒါကိုပဲ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ပြောထား မေးထားတာတွေ့ရလို့ အားတက်မိတယ်...
ကိုပေါကိုယ်တိုင် တီထွင်ပြီးရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဝယ်လို့ရတဲ့ နေရာကို သိလာရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပရိသတ်ကြီးကို အမြန်ဆုံး အသိပေးစေချင်ပါတယ်...
ပို့စ်ဖတ်ပြီး အလိုအလျှောက် မီးပူတိုက်စက် ဆိုတာကို မျက်စိထဲ တန်းမြင်လာလို့ ရေးလိုက်မယ်ကြံတော့ မှတ်ချက်တွေမှာ ဒါကိုပဲရေးသွားကြတာကိုး။ ပြည်သူ့သဘောထား အစစ်အမှန်ပဲဗျ။
အင်း.. မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အလိုအလျှောက် ရင်ကြားစေ့စက်ကလေး ပေါ်လာရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။
စားချင်တာကို အဆင်သင့်ချက်ပေးတဲ့စက်...ရေးချင်တဲ့အကြောင်းကို စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အလိုအလျောက် post တင်ပေးတဲ့စက်...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်လောက်က စ လုံးမှာ ရုံးကပေးတဲ့ ဖုန်းကို သတိရလို့ ပြုံးမိသေး...အုတ်နီခဲ လောက်ရှိတဲ့ ဟန်းဖုန်းကြီး..သူ့သယ်ရတာကို ပခုန်းတဖက်စောင်းလို့..
အလိုအလျောက် မီးပူတိုက်စက် ကိစ္စကို စိတ်အ၀င်စားဆုံးဖြစ်ကြောင်းပါ .......
လူကြံလျှင် ဘာတောင် အ၀ှာဖြစ်ဆိုလား ...
လိုလျှင်ကြံဆ နည်းလမ်းရ မို့..
အရည်အချင်းရှိသုများ ကြံကြ ဆကြ စေချင်လှပါသည်း)))
လျှော်လိုက်တာနဲ့ ပြန့် ရန့် ဆန့် သွားပြီး မီးပူတိုက်ဖို့မလိုတဲ့ဆပ်ပြာမှုံ့ ထွင်ဖို့က ပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်။
To Democracy activists....
Will Myanmar not be able to independent if General Aung Sann didn't exist at this time?
How many unindependent countr(countries)still remain in South east asia and whole asia so far?
Which country is the most trouble state after British colonial rule in ASEAN country?
General Aung Sann was negligent and so the whole cabinet members were lost their lives.
I think fairly,Gen Aung Sann is responsible for losing many patriotic citizens at the meeting which he chaired and lead the team.
Asaleader he can't protect the team by arranging enough security.
He's over-confident type.
It can be named nowadays Irresponsible Behaviour and leaving Myanmar country in conflcts.
Suu Kyi must go back to her step father contry and take care her sons will be the last opportunity for her.
We Myanmar citizens don't want to see face of traitor who came Myanmar for personal ambitions and encouraged sanctions to innocent Myanmar citizens.
We want Suu Kyi go back her beneficial country.
You don't belong to Myanmar.
Please do so before all citizen's anger and curse fall on you and your generation.
ဒီက တို့ မောင်လေး အလိုအလျောက်မီးပူတိုက်စက် လိုချင်နေတာလား... လွယ်လွယ်လေး... အိမ်ကလူကြီး ကျောင်းတုန်းကတည်းက ကျင့်သုံးလာတဲ့ နည်းလေးကို ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်... အကျီင်္လေးကိုခေါင်းအုံးအောက်ထားပြီးအိပ်... မနက်ကျတော့ အဆင်သင့်ဝတ်လို့ ရမယ်..
ကိုပေါရေ... ချစ်လို့ အစိုးရိမ်လွန်ကြတာ ထင်ပါတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတရားတွေရဲ့ အစွမ်းအာနိသင်ရယ် ပြီးတော့ ကာယကံရှင်ရဲ့ သီလရယ်ခြုံလိုက်တော့ ဒီထက်ဘာလုံဦးမှာလဲနော်
I want to laugh that Suu Kyi have religious faithful Thila(Precepts).
If she really has faithful Thila(Precepts),she won't confront and actively involved for sanctions on innocent Myanmar citizens.
What people witnessed is that Myanmar is troubled since after she arrived Myanmar.
Countries which supported Suu Kyi strongly faced financial crisises.
But Myanmar's good neighbouring countris who supported Myanmar when in need become rich and rich,stronger and stronger everyday.
Naypyidaw is very grand place.More and new kind of Natural resources are surfacing from nature earth more and more.
See who is correct?Avoid unlucky people wisely Or you'll...
Please tell your mum, Mrs Aris , that there is no political prisoner in Myanmar. There are only political beggars in Myanmar. So, she can explain to her husbands in pillow talks. Nice one .
ဘဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျို့ - - - - -
saya paw.. i heard NLD has releaseapaper titled 'economy analysis'. what do u think of this paper? please use your best brain to analysis this (even if i know u don't have one.)
ကိုပေါ (EcE) ကလောင်နာမည်နဲ့ ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ် နှစ်လည် မဂ္ဂဇင်း ၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ " နံရံပေါ်ကစာ " ဝတ္ထုတိုကို ဒီမှာ တင်ထားပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့် (http://sawthetlin.blogspot.com/2011/01/blog-post_16.html)
To the anonymous who is wasting her time with non-funny jokes that are irrelevent to this post,
I noticed that all the people commented here including the ko paw neglected you as if you are an shitty pig. Don't you feel ashamed of yourself? The way you write something and next commnet continued for the auto-ironing iron discussion is getting very ridilucus to me. LOL.
( I purposely addressed you "Her" as I suspect that you don't have balls)
ငပေါတယောက် ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။ ဘိုကတော်ဆီများ အခစားသွားဝင်နေသလားဗျို့။ အလှည့်ရော ရောက်ရဲ့လား ။ မယ်မယ်ဘုရားမှာ ကိုယ်လုပ်တော်တွေက များပါသဘိနဲ့။ ရှူပေါက်ချိန်တောင် ရတာဟုတ်ဘူး။ ခိ ခိ သမီးလေးတော့ ယောင်လို့တောင်မခေါ်သွားနဲ့နော်။ အကျင့်ဆိုတာကူးတတ်တယ်ဗျ။
ကိုယ့်မျိုးဆက်ကို ကိုယ်မှမထိမ်းရင် ဘယ်သူမှ မထိမ်းပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ကိုယ့်စာပေကို ကိုယ်မှ မလေးစားရင် ဘယ်သူမှ မလေးစားပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်မှမချစ်ရင် ဘယ်သူမှမချစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာသာသနာကို ကိုယ့်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှ မကြည်ညိုရင် ဘယ်သူမှ မကြည်ညိုပါဘူး။ ကိုယ်မှ တန်ဖိုးမထားရင် ဘယ်သူမှ တန်ဖိုးမထားပါဘူး။
ပြည်ပဒေါ်လာစားအတိုက်အခံ (၇) မျိုး =>
(၁) အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတော့သဖြင့် လက်ရှိအစိုးရ မရှိမှ ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဟု တွေးမိသောကြောင့် လက်ရှိအစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် ကန့်ကွက်မည့်သူများ။
(၂) ဘာသာရေးလွမ်းမိုးလိုသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည့် အခြားဘာသာဝင်များ
(၃) လူမျိုးရေးသြောဇာလွမ်းမိုးလိုသည် ဗမာ မဟုတ်သည့် တိုင်းရင်သားများနှင့် ကပြား များ
(၄) အရူးနှစ်မျိုး (စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးရူးနေသူများနှင့် ဦးနှောက် ကျပ်မပြည်၍ ရူးနေသူများ)
(၇) မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား၊ မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကြောင်း အသေအချာမသိ၊ မတတ်သူများ